टाउकोमा भएको भूमरी हेरी थाहा पाउनुहोस् भविष्य ! किन हुन्छ एउटै टाउकोमा २,३ वटा भुमरी ! थाहा पाउनुहोस् – Todays Nepal
टाउकोमा भएको भूमरी हेरी थाहा पाउनुहोस् भविष्य ! किन हुन्छ एउटै टाउकोमा २,३ वटा भुमरी ! थाहा पाउनुहोस्
सामुन्द्रिक शास्त्रका अनुसार,जन्मजात शिरमा हुने भूमरीले जीवनमा महत्तोपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । आज हामी तपाईहरुलाई मान्छेको शरिरमा हुने खत , कोठी आदिले जीवनमा के कस्तो प्रभाब पार्छ भन्ने कुरा बताउन जाँदैछौँ । तपाईहरु धेरै जस्तो मान्छेहरुको टाउकोमा गोलो भूमरी परेको देख्न सक्नुहुन्छ । कसैको शिरमा एउटा मात्र देखिन्छ भने कसैकोमा २,३ वटा सम्म रहेको हुन्छ । मान्छेहरुको शिरमा हुने यस्ता भूमरी कसैको दाँया हुन्छ भने कसैको भने बायाँ देखिने गर्छ । सामुन्द्रिक शास्त्र अनुसार यी भूमरीले मान्छेको भविष्य समेत बताउने गर्दछ ।
शिरमा भूमरी भएका मान्छेहरु निकै नै दयालु स्वभाबका हुन्छन । तपाईहरुलाई यो पनि जानकारी गरौ कि यस्ता व्यक्तिहरु धेरैनै सज्जन र शान्त स्वोभाबका हुने गर्छन् । कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि उनीहरु धेरै पटक सोच विचार गर्ने गर्छन् ।जुन बच्चाको शिरमा, तस्बिरमा देखाए अनुसार भूमरी रहेको हुन्छ,सामुन्द्रिक शास्त्रका अनुसार यस्ता बच्चाहरुले भविष्यमा आफ्नो परिवारको धेरै ख्याल राख्ने हुन्छन र घरका सम्पूर्ण जेष्ठ सदस्यहरुलाई सम्मान गर्ने गर्छन् ।शिरमा यस्तो भूमरी देखिएको छ भने त्यो बच्चा पढाईमा लगनशील र धेरै बुद्धीमान हुने गर्छन । उनीहरु आफ्ना साथीहरुसँग मित्रताको सम्बन्ध राम्रो सँग निर्बाह गर्न सक्षम हुन्छन । यिनीहरु बचपन देखिनै अरुको दुख देख्न नसक्ने र अरुलाई मद्धत गर्ने काम मा अग्रस्थानमा पर्ने गर्छन ।
शास्त्रमा यस्तो भनिएको छ कि यदि कुनै व्यक्तिको शिरमा दुई वटा भूमरी छ भने उ धेरै जिद्दी स्वभाबका हुने गर्छन । यस्ता व्यक्तिहरु भबिष्यमा आफ्ना बाबु आमा को राम्रो हेरचाह गर्छन र परिवारमा सधैब साथ र सहयोग राख्न सफल हुनेछन् । उनीहरु परिवारका मात्र अन्य नभई समाजको समेत आशा लाग्दा व्याक्तितो को रुपमा स्थापित हुन सक्छन । बच्चा देखिनै उनीहरुको स्वभाब अलि हतार ले निर्णय गर्ने हुँदा कोहीबेला सानो ठुलो असर पर्ने गर्छ र जिद्दी स्वभाबका कारण कोहीबेला हानी नोक्सानी पुर्याउन सक्ने कुरा सामुन्द्रिक शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि बच्चाको शरिरमा भूमरी अनिबार्य हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन । कुनै बच्चाको जन्मजात यस्ता भूमरी हुन्छन भने कसैको नहुन पनि सक्छ । यदि कुनै बच्चाको शिरमा दुई वटा भूमरी छ भने त्यस बच्चालाई सानै देखि बोली वचन र उसको चाल चलनमा ध्यान दिनुपर्छ जसका कारण उनीहरुको भबिष्यमा देखिन सक्ने नराम्रा बानीहरु बिर्सिनेछन् । यसरि, भविष्यमा उनिहरुबाट घरपरिवार वा स्वेम आफैलाई हुन सक्ने हानीनोक्सानी बाट जोगाउन सकिन्छ ।
घरकाे काम छाेडेर महिनकाे ३ पटक माइती जाने चेलीलाई सुझाव
नेपाल आउँदै बलिउड अभिनेत्री पूनम पाण्डे